Ciidamada Nabad Sugida Jubbaland ayaa sheegeen inay gacanta ku dhigeen ninkii miinada ugu xiray gaarikiisa wasiirka arimaha gudaha – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Nabad Sugida Maamulka Jubbaland ayaa sheegeen inay gacanta ku dhigeen Wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa Ciidamada maamulka Jubbaland, kaa oo dhawaan Qarax miino gaariga ugu xiray Wasiirka arimaha Bulshada maamulka Jubaland Macalin Maxamed Ibraahim Maxamuud .
Taliska Nabad Sugida Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay fashiliyeen qaraxa miino ee gaariga loogu xiray Wasiirka ayna soo qabteen ninkii ka dambeeyay qaraxaasi oo katirsanaa Ciidamada maamulka Jubbaland.
Ninkan Qaraxa gaariga ugu xiray Wasiirka ayaa la sheegay in mudo ah in uu katirsanaa Ciidamada Maamulka Jubbaland sidoo kale uu hoos kala shaqeenayay dagaalyahanada Al-Shabaab , waxaana wiilkan adeer u ahaa Wasiirka Arimaha Bulshada uu gaariga qaraxa ugu xiray.
Wareysi uu bixiyay ninka qaraxa la fashilmay gaariga ku xiray oo lagu Magacaabo Cabdi Qadar ayaa sheegay in isagu ka dambeeyay qaraxa lagu xiray gaariga Wasiirka, waxa uuna tilmaamay in Al-Shabaab u balan qaadeen in la siinayo lacag dhan 15-kun oo Dollar hadii uu qorshahaasi guuleesto.
”Qaraxa aniga ayaa gaariga ku xiray waana la isoo dhiibay, lacag 15-kun Dollar ayaa la ii balan qaaday in la isiinayo ,mana kalaba labeyn marka lacagta la ii sheegay qaraxa ayaana durba gaariga ku xiray, qaraxa markii aan ku xiray kadib 50-dollar ayaa la isoo tuuray magaalada ayaana galay, aniga oo magaalada jooga ayaa waxaa ii yimid ina xiray ciidamada Nabad Sugida ” Ayuu yiri Cabdiqadar.
Ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa la rumeesan yahay in ay ku jiraan xubno katirsan ama wada shaqeyn la leh Al-Shabaab, waxaana horey u dhacday in Taliyihii Nabad Sugida Jubbaland uu dilay nin Al-Shabaab katirsanaa sidoo kale kamid ahaa Ciidamada Nabad Sugida Jubbaland.